Cedar, hazo nasionalin'i Libanona | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | Fitsangatsanganana any Azia
Cedar no famantarana ny firenena any Libanona, izay miseho eo amin'ny sainam-bolongany fotsy fotsy ary misy tadiny mena roa. Na ny anaran'ny firenena aza dia toa avy amin'ny teny hoe Luban, izay mety hidika hoe "tendrombohitra misy ranomanitra", iray amin'ireo toetra mampiavaka azy indrindra ny fofona manitra entin'ny hodi-kazo.
Mampalahelo fa ny ala sedera maniry izay hita tamin'ny famaritana ny firenena nataon'ny mpahay tantara taloha dia nanjavona nandritra ny taonjato maro. Efa lasa lavitra ny tany lao hatramin'ny andro taloha. Ireo sedera izay mbola mijoro ankehitriny dia tanjon'ny fiarovana manokana ataon'ny manampahefana, na amin'ny lanjany voajanahary na amin'ny vesatry ny kolontsaina. Ny ampahany tsara amin'ireo sisa velona farany ireo dia mifantoka amin'ny tehezan-tendrombohitra Libanona, haavo iray manjaka any Beirut, renivohitry ny firenena. Ilay ala sedera Bechare malaza io.
1 Mampiavaka ny sedera any Libanona
2 Fampiasa sedera any Libanona
3 Toetran'ny fanafody sedera any Libanona
Mampiavaka ny sedera any Libanona
Cedar no zavamaniry tonga lafatra mba ho marika nasionalin'ny Libaney, toa azy Izy io dia hazo lava sy tsara tarehy izay manome hanitra mahafinaritra be koa. Ity dia kôsmera mitombo miadana mitombo avy any Moyen Orient, an'ny fianakaviana Pinaceae (Pinaceae) ary ny anarany ara-tsiansa dia Cedrus libani. Mipetraka amin'ny faritra be tendrombohitra izy io, eo ambonin'ny 1300 ka hatramin'ny 1800 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina no amboniny.
Mahatratra hatramin'ny 40 metatra ny haavony ary, toy ny ankamaroan'ny conifers, dia misy ravina maitso mandavantaona. Ireo dia maitso lalina, henjana, hatramin'ny 10cm ny halavany. Ny vatan-kazo dia matevina 2-3m ny savaivony. Izy io dia manana hazo avo lenta tokoa, hany ka mahazaka ny fitsapana ny fotoana tsy misy fahasimbana. Raha ny marina dia efa nankasitraka be io tamin'ny andro taloha. Araka ny Baiboly, Solomona Mpanjaka dia nampiasa azy io hananganana ilay malaza Tempolin'i Solomona.
Raha miresaka momba ilay voankazo isika, ny cone, dia manana endrika boribory ary mirefy 10cm eo ho eo ny halavany. Ao anatiny ireo voa, izay hitsimoka rehefa avy nandany volana vitsivitsy tamin'ny maripana ambany, mandritra ny lohataona.
Ity dia zavamaniry iray mahazaka mora foana ny mari-pana sy ody maina, nefa na izany aza dia mety hanana fotoan-tsarotra izy raha mafy ny ririnina na mando maharitra ny tany.
Fampiasa sedera any Libanona
Ity dia kofera iray izay, hatramin'ny andro taloha, dia novolena tamin'ny ankapobeny noho ny hazo. Fanaka tena tsara dia vita miaraka aminy, izay mateza tokoa. Inona koa, mora be ny miasa, noho izany dia afaka manamboatra zavamaneno, kilalao, sary sokitra sns ianao.
Ny fampiasana iray hafa dia toy ny zavamaniry haingo. Na dia miadana mitombo aza izy io, ny fiorenany tsy ara-dalàna dia mahatonga azy io ho lasa karazan-jaza mahaliana tokoa hanana zaridaina lehibe, na ho toy ny santionany mitokana na hambolena milahatra, ho fefy. Ny iray amin'ireo toetrany dia ny, tsy toy ny sedera hafa, manohana ny tany sokay, noho izany dia tsy ilaina ny manome azy ireo mineraly fanampiny (toy ny vy) fa ny fitomboany sy ny fivoarany dia mety indrindra.
Misy ireo izay manana azy io ho bonsai mihitsy, mahatratra santionany tena mahavariana izay ampitaina amin'ny taranaka mifandimby. Raha manana ravina kely kokoa ianao dia afaka miasa nefa tsy mila manasarotra be amin'ny zezika, ary satria afaka miaina mandritra ny 2.000 taona dia misy fotoana be dia be ahafahana manana hazo tena mahomby ao an-trano Inona koa manohitra tsara ny fanetezana ary afaka miaina tsy misy olana ao anaty vilany tery izy, mazava ho azy, raha omena fikarakarana sahaza.
Fa ankoatra ireo fampiasana mahaliana ireo dia tianay ihany koa ny manantitrantitra fa manana fananana fanafody tsy azo odian-tsy hita.
Toetran'ny fanafody sedera any Libanona
Cedar no ampiasaina ambonin'ny rehetra toy ny fa mamono otrikaretina izy, satria manampy amin'ny ady amin'ny aretina izany. Azo ampiasaina ihany koa izy io hitsaboana ny fiasan'ny hoditra mahazaka. Fa io koa dia hanampy anao hanamaivana ny soritr'aretin'ny bronchitis, gripa ary sery, tazo ambany, hampiato ny fivalanana sy / na handoa, hitsaboana ny fandehanan-dra, ary farany nefa tsy kely indrindra, dia handroaka sy hanafoana ireo katsentsitra anatiny (kankana) mety ho azonao manana.
Ho an'ity, saika ampiasaina ny zava-maniry iray manontolo: ravina, faka, Mizarazara ho sosona nofon y ambioka. Tsotra ny fomba fanomanana, satria tsy maintsy mahandro azy ireo fotsiny ianao ary manao infusion. Mazava ho azy fa ho an'ny ratra dia tsara kokoa ny maka ravina tanora vitsivitsy amin'ilay hazo, manorotoro azy ireo amin'ny paty tsara ary apetaka amin'ny lamba mivantana amin'ny hoditra. Amin'izany dia ho sitrana aloha be noho ny nandrasana izy io.
Na dia mandeha any aza ianao dia manoro hevitra anao hahazo izany menaka manitra sedera, izay hanampy anao koa handroaka bibikely, izay tsy maharary mihitsy ny afaka mankafy bebe kokoa ny fialan-tsasatrao.
Ahoana ny hevitrao momba ny sedera any Libanona? Zavamaniry mahaliana sy liana, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Cedar, hazo nasionalin'i Libanona